तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुर्नेछ विशेष ध्यान ! « Sansar News
तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुर्नेछ विशेष ध्यान !
मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। तर अवसर र चुनौती एकसाथ देखा पर्ने हुँदा होसियारीसाथ काममा जुट्नुपर्ला। छिद्र खोतल्नेहरूले दुःख दिनेछन्, विशेष योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको साथ–सहयोगले मात्र अप्ठ्यारा चुनौती पार लगाउन सकिनेछ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकार तथा सेवामूलक काममा मन जानेछ।
खर्च लागे पनि दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। शुभचिन्तकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न व्यवहारमा सजग रहनुहोला। भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। घरेलु समस्यामा अलमलिनुपरे पनि क्रमशः समस्या सुल्झााउँदै जानेछन्। रमाइलो यात्रा गर्ने साइत जुर्न सक्छ। वादविवादबाट भने टाढै रहनुहोला।
२०७८ असोज ३० गते, शनिवार, (१६ अक्टोबर २०२१)